SOICARE 100% Saliidda Daaweynta Aromatherapy-ga ah ee Daaweynta Daaweynta ah ee loo yaqaan 'Transfuser', Shiinaha SOICARE 100% Saliid Muhiim ah Saliida Daaweynta Daaweynta Daawada Aromatherapy-ka ee Soosaarayaasha Diffuser, Shirkadaha, Warshadaha - Shirkadaha Warshadaha Sunpai Xaddidan Yihiin
SOICARE 100% Saliidda Daaweynta Aromatherapy-ga ah ee Daaweynta Daaweynta Daawada loo yaqaan 'Disfuser'
22 * 10 * 4.5 cm / 6 gogo '
Qeybaha 300000 bishiiba
● (1) Saliidaha Xajiinta Aromatherapy ee Tayada leh ee Muhiimka ah ee Liiska 6; Dhamaan saliidaheena waa mid dhab ah, dabiici ah, aan dhameystirneyn, aan tabaaleysaneyn, waxyaabo aan lagu darin, kuwa buufin;
● (2) Top Aromatherapy OIls: Lavender, Orange, Basbaas, Liin dhanaan, Geedo Shaah iyo Cudurka;
● (3) DIGNIINTA AMMAANKA: Isticmaal dibedda oo keliya. Wixii aan ahayn aromatherapy-ga, ku dil saliidda side. Isticmaalka jirka la mariyo, wax aad u yar ku xoq gudaha suxulkaaga xusulkaaga si aad u tijaabiso xasaasiyad kasta ka hor intaadan isticmaalin. Jooji adeegsiga haddii raaxo daro ama haddii xanaaq yimaado. Ka fogee meel ay ku habboon yihiin xayawaanku Bisadaha waxay gaar ahaan u nugul karaan saliidaha lagama maarmaanka ah. Ka fogow taabashada indhaha, ka fogee meel carruurtu gaarto;
● (4) Si taxaddar leh u xulashada saliidaha keydka saliidaha Muhiimka ah waxay ku saleysan yihiin astaamaha shaqsiyadooda iyo faa'iidooyinkooda iyo sidoo kale kartidooda isku-dhafka ah ee doorkaaga udgoonka udgoon leh udgoonkaaga iyo baahiyaha daweynta. Gogosha hadiyadda saliida ee aasaasiga ah waxaa ka mid ah qaybo muhiim ah oo kuu suurtagelinaya inaad sameysato noocaaga gaarka ah ee isku-dhafka xoogga leh.;
● (5) Dhalooyinka Amber si ay u sifeeyaan iftiinka;
●(6) Urta la heli karo: Shaaha shaaha, liinta, liinta, liinta, liinta macaan, basbaaska, Cinnamon, Bergamot, Lemongrass, Peppermin, canab, Lavender, Rosemary, Eucalyptus,
Oranji macaan, liin, geed geed, Frankincense.
6 qaybo / sanduuq
SP-A09 200ml caraf udgoon
SP-G09 SOICARE 200ml dhoobada bamboo dhoobada udugga saliida lagama maarmaanka ah
SP-E001 30ml alwaax ceramic nebulizer biyo la'aan baahsan saliidaha diffuser